Debe ekwentị gị na ịgbachi nkịtị na oge a kara aka na Sound Off Reborn 2017 | Androidsis
Sound Off ịlọ ụwa 2017 na-eme usoro ihe omume iji mechie ekwentị n'oge ụfọdụ
A ka na -ebipụta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke nwere ụdị omume ọma na anyị enweghị ike ịdọpụ. Ọ bụ ezie na gam akporo yiri ka ọ dịla njikere, enwere ọrụ na arụmọrụ ndị ọzọ enwere ike irite uru na ya, dị ka akpaaka ụlọ ma ọ bụ ngwa maka mgbe anyị na -anya ụgbọala. A ka ga -ahụ ọtụtụ ihe, n'agbanyeghị na ọ na -adị mma mgbe niile iweta ngwa nke ahụ na -emeziwanye n'ụzọ nke ewepụtarala.
Nke a bụ ebumnuche nke Sound Off Reborn 2017, obere ngwa dị mfe ị nwere ike ịmepụta mmemme dị mgbagwoju anya imechi ekwentị gị ka ọ bụrụ nkọwa zuru oke karịa nhọrọ ọ bụla ị nwere na gam akporo. Ọ bụ ngwa nwere ike ịba uru nke ukwuu ma ọ bụrụ na ị nwere oge oge n'izu gị nke enweghị ike ịkwụsị ya n'ụzọ ọ bụla na oku ekwentị ma ọ bụ ọkwa.
Ugbu a, Sound Off Reborn 2017, bụ ngwa mmemme dị mfe, ọ bụ ezie na onye nrụpụta emeela ka o doo anya na ọ ga -ebipụta ụdị ọhụrụ nwere atụmatụ ndị ka elu. Agbanyeghị na ee, ọ ga -adị na ụdị adịchaghị mma, yabụ ị ga -agafere igbe iji nweta ha niile.
Ngwa n'onwe ya bụ onye mmemme maka ịgbachi nkịtị ekwentị, yabụ na ọ nwere ike gbanyụọ olu na oge a kara aka. Ọ bụ ngwa bara ezigbo uru maka oge ọmụmụ ma ọ bụ nke anyị ga -arụ ọrụ na enweghị ike ịkwụsị anyị n'ụzọ ọ bụla. Naanị ị ga -eme mmemme mgbe ekwesịrị imechi ekwentị na ngwa ahụ na -elekọta itinye ihe ahụ n'ọrụ n'oge enyere.
Ngwa dị mma yiri ka arụrụ arụ "Emegbula" nke ekwentị gam akporo, mana ọ dị mfe ma nwee njiri mara onye ọrụ. N'ime ekwentị ọhụrụ, dị ka ndị nwere Android 6.0 Marshmallow ma ọ bụ karịa, ị nwere ike ịkọwapụta mgbe ịchọrọ ịga gbachi nkịtị, naanị mkpu ma ọ bụ oku kacha mkpa.
Got nwetara ya site na n'efu site na Playlọ Ahịa Google.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Sound Off ịlọ ụwa 2017 na-eme usoro ihe omume iji mechie ekwentị n'oge ụfọdụ
Onye ọrụ mbu gam akporo Android Nougat ROM maka Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Anyị na-akụziri gị otu esi etinye ya site na nkwụsị
Samsung Galaxy Tab 3, nke a bụ ihe anyị maara ugbu a